कुनैपनि उत्पादक कम्पनी नेपाललाई खोप दिन तयार देखिएनन, खोप अभियान प्रभावित हुने आशंका « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » कुनैपनि उत्पादक कम्पनी नेपाललाई खोप दिन तयार देखिएनन, खोप अभियान प्रभावित हुने आशंका
कुनैपनि उत्पादक कम्पनी नेपाललाई खोप दिन तयार देखिएनन, खोप अभियान प्रभावित हुने आशंका
चीनले दिदै अनुदानमा ३ लाख डोज खोप
nepaltube Published On : 1 February, 2021
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी तीन महिनामा सबै नागरिकलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको केही दिनमै एक वर्ष समय लाग्ने भन्दै भनाई फेरे । अहिले भारतले उपहारमा दिएको खोपले नेपालमा खोप अभियान चलिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले एक खाले प्रतिबद्धता र भाषण गरिहँदा कुनैपनि कम्पनीले नेपाललाई खोप दिने चाहना नदेखाएपछि हाल सञ्चालित खोप अभियान नै प्रभावित हुने आशंका बढ्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत खोप लगाउन कम्तिमा पनि २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । जतिसक्दो छिटो खोप ल्याउने भनिएपनि कुनै पनि उत्पादक कम्पनीले खोप बिक्री गर्न इच्छा नदेखाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै चिन्तित देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ती व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. भिमसिंह तिङ्करीले खोप खरिद प्रक्रिया नै सुरु नभएको जानकारी दिएका छन् । भारतले खोप अनुदानमा दिनुअघि नै खोप समितिले उत्पादक कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । तीन वटा उत्पादक कम्पनीलाई दुईतीन पटक नै पत्राचार गर्दासमेत अहिलेसम्म जवाफ नआएको महाशाखा प्रमुख तिंकरीले बताए । उक्त पत्रको जवाफ नआइकन खोप खरिद प्रकिया सुरु हुँदैन ।
कम्पनीहरुले उत्पादन कम भएको र आफ्नै देशमा खपत हुने भएकाले तत्काल खोप दिन नसक्ने जवाफ फर्काएको स्वास्थ्यमन्त्रालय बताउँछ । रपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । नेपालमा औषधि व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म सेरम इनिस्च्युटको कोभिसिल्ड खोपलाई मात्र आपतकालीन अनुमति दिएकाले सेरमकै खोपलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सेरम इनिस्च्युटले १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिएर खोप खरिद गर्न नैतिक दबाब दिएपनि थप खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने संकेत गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको ३ प्रतिशत खोप पनि मार्चसम्म आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य ४ वटा उत्पादक कम्पनीसँग खोप खरिदका लागि छलफल चलिरहेको बताइएपनि निष्कर्षमा नपुग्दा थप खोप कहिले नेपाल आइपुग्ने अन्यौल छ ।
चीनले दिदै अनुदानमा ३ लाख डोज सिनोफर्म खोप
चीनले नेपाललाई ३ लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदान उपलब्ध गराउने घोषण गरेको छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूताबासलका अनुसार नेपाल सरकारको आग्रहमा चीन सरकारले कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । चीनभित्र र बाहिर पनि कोरोना खोपको माग धेरै भएपनि चीन सरकारले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको दुतावसले जनाएको छ । चीनले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने खोप चिनियाँ कम्पनी सिनोफर्मले विकास गरेको हो । यो खोपले चीनमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएपनि नेपालमा अहिले दर्ता भएको छैन । सिनोफर्मको खोप नेपालमा दर्ता गर्न नेपाली अधिकारीहरुसँग कुराकानी भइरहेको चिनियाँ दूताबासले जनाएको छ । तर खोप कहिले नेपाल आइपुग्ने एकिन भएको छैन ।
यसअघि दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपाललाई १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएसँगै माघ १४ बाट खोप अभियान चलिरहेको छ । नेपालको खोपको मागमा उत्पादक कम्पनीले साथ दिन नसक्ने जनाएसँगै खोप अभियान नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।